Kitra- « Cosafa Castle Cup » : i Rinjala ihany ny matihanina mandrafitra ny Barea | NewsMada
Kitra- « Cosafa Castle Cup » : i Rinjala ihany ny matihanina mandrafitra ny Barea
Nanainga, omaly tolakandro ny Barea hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, tapany atsimo (Cosafa Castle Cup) hatao atsy Afrika Atsimo. 20 ireo mpilalao voaantso ka i Rinjala no hany tokana mpilalao matihanina amin’izy ireo.
Mila ravinahitra any amin’ny FC Sion any Soisa ity kintan’ny kitra eto amintsika ity, hanampy ireo mpilalao avy eto an-toerana niatrika an’i Soudan farany teo. Anisan’izany i Leda sy i Mario ary i Toby. Ho avy any an-toerana avy hatrany koa i Njiva satria vita, omaly ny fitsapana azy tany Maraoka. “Hamonjy anay any Afrika Atsimo izy”, hoy ny mpanazatra, Raux Auguste. Amin’ny ankapobeny izany, mpilalao avy eto an-toerana avokoa ireo mandrafitra ny Barea amin’ity fifaninanam-paritra ity. Eo, ohatra, ny niantsoana indray ilay lohalaharan’ny Elgeco Plus, i Bila.
Hifanandrina amin’i Seychelles ny Barea
Ao amin’ny sokajy B ny misy ny Baera ka hifanandrina amin’i Seychelles, ny andron’ny 26 jona izao, ary hifampitana amin’i Zimbaboe kosa ny 28 jona. Lalao farany amin’ny fifanintsanana hatrehin’ny Barea ny fifandonany amin-dry zareo Mozambikanina. Ahitana an’i Angola sy i Malawi ary ny Nosy Maorisy miaraka amin’i Tanzania. Hiatrika ny manasa-dalana ny ekipa roa tafavoaka isaky ny sokajy ary hatao ny 9 jolay kosa ny famaranana.
Tsiahivina fa nanao lalao fanomanan-tena teny Carion ny Barea nialoha ny nandehanany atsy Afrika Atsimo. Nirava sahala 2 no ho 2 tamin’ny Jet Mada avy any Itasy izy ireo raha efa nitarika 2 no ho 0 ny Barea teo am-pialan-tsasatra. “Nampidirina avokoa ny mpilalao rehetra ka nahatonga ny lalao ho sahala tamin’ny farany”, hoy ny mpanazatra.